Mgbasa #GetVaccinated na -enweta nkwanye ugwu ndị isi nkwanye ugwu | Martech Zone
Ọbụlagodi tupu etinye ọgwụ mgbochi COVID-19 mbụ na US na Disemba 2020, ọnụ ọgụgụ dị elu na ntụrụndụ, gọọmentị, ahụike, na azụmahịa na-arịọ ndị America ka ha gbaa ọgwụ mgbochi. Otú ọ dị, mgbe ịwa ahụ nke mbụ gasịrị, nkwụsị ịgba ọgwụ mgbochi dara ọbụna ka ọgwụ mgbochi ahụ bịara ruo ebe nile na ndepụta nke ndị ruru eru inweta ha tolitere.
Ọ bụ ezie na agbanyeghị mbọ ọ bụla ga -eme ka onye ọ bụla nwere ike ịgba ọgwụ mgbochi mee nke a, enwere ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike kwenye, ọ bụghị site na mgbasa ozi ọkọlọtọ ma ọ bụ Dr. Anthony Fauci. N'akụkụ a, mkpali ị nweta ndị mmadụ ọgwụ mgbochi ọrịa kpughere njedebe nke PR, ahịa, na ụzọ mgbasa ozi iji rute ụfọdụ igwe mmadụ, na ime nke a, nwetara usoro na -apụta - ndị na -emetụta mgbasa ozi mmekọrịta - nnabata na ekele.
Ekele dị ukwuu na a $ 1.5 ijeri PR na blitz mgbasa ozi nke White House bidoro na Machị 2021, 41% nke ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi zuru oke na njedebe nke May, dị ka data sitere na erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC). Mana ịdị irè nke mbọ mgbasa ozi ọdịnala ndị ahụ yiri ka ọ na -ebelata ka oge ọkọchị na -abịaru nso, yana ịgba ọgwụ mgbochi ahụ belatara.
Houselọ White House chọrọ ụzọ ịwa ahụ ọzọ iji lebara anya n'amaghị ama na ịla azụ nke dị na mba niile. Nlekọta ahụ kpebiri iwere ndị agha nke ndị na -eme ihe ike ịlaghachi azụ na -ezighi ezi banyere ọgwụ mgbochi ma nwekwuo mmata n'etiti ndị otu nyocha ha gosipụtara na -eguzogide ọgwụ mgbochi ahụ ọ bụghị n'ihi okpukpe ma ọ bụ echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana maka ihe ndị ọzọ.
Ndị otu Gen Z kwara arịrị maka eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ ahụike ọha anaghị ahazi ozi ha Ọgbọ Instagram. Dị ka ọmụmaatụ, otu nwanyị dị afọ 22 nke e hotara na akwụkwọ akụkọ lekwasịrị anya na sayensị Ụgha n’April rụtụrụ aka na ọ nweghị ozi ọ bụla n’oge ahụ kọwara ihe kpatara nwa dị afọ 19 nwere ahụike kwesịrị iji nweta ọgwụ mgbochi ahụ.
Ileba anya na data Instagram bara uru n'ịghọta ihe kpatara White House ji chigharịkwuru ndị na -eme ihe ike iru ndị dị ka ya, ma na -enye aka kọwaa ka ebumnobi ahụ siri gbasaa na mpaghara mpaghara mmetụta. N'ime ọnwa asatọ mbụ nke 2021, 9,000 ndị na -emetụta Instagram na US mere mkpokọta 14,000 na -agba ndị na -eso ụzọ ha ume ịgba ọgwụ mgbochi yana itinye hashtags. #gbaara ọgwụ mgbochi, #getvaccinated, #ọgwụ mgbochi ọrịa, #ọgwụ mgbochi na #getthevax. Edere ozi ndị ahụ na ndị na-ege ntị ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 61, nke 32% nọ n'ime afọ 13-24. Nnukwu ọnụ ọgụgụ ahụ sitere na aha site na aha ezinụlọ dị ka Reese Witherspoon, nwere ihe karịrị nde mmadụ anọ, yana Oprah Winfrey, nwere nde atọ na ọkara.
Mana n'ime ụwa mmetụta, ibu anaghị adị mma mgbe niile. Dịka ọ dị mkpa na ngụkọta nke ndị na-ege ntị bụ eziokwu na 58% nke posts esiteghị na aha marquee kama site na ndị na-emetụta nano, ndị nwere ndị na-eso ụzọ na-agụta n'etiti 1,000 na 10,000. A maara na ndị na-eso nano-influencers bụ na -etinye aka nke ukwuu ma na -eguzosi ike n'ihe, na -egosipụta ọkwa nke nraranye na, ee, mmetụta nke ọbụla Dr Fauci hụrụ n'anya enweghị ike imetụ aka. Site na ịkekọrịta akụkọ nke ịgba ọgwụ mgbochi ha, na ịgba ndị na-eso ụzọ ha ume ịtụle ya, ndị na-eme ihe ngosi gosipụtara izi ezi nke enweghị ike ịhụ na mkpọsa mgbasa ozi gọọmentị na-akwado ma ọ bụ arịrịọ ndị ọrụ ahụike juputara n'ule ọgwụ.
Iji doo anya, ndị na -eme ihe abughi mgbọ ọlaọcha na nkwanye ndị mmadụ ịgba ọgwụ mgbochi. Ọ bụ ezie na ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi rutere 41% n'ime ọnwa ole na ole mbụ mgbe ọgwụ mgbochi gasịrị ọha, pasent nke ndị America gbara ọgwụ mgbochi nke ọma arịgoro naanị 14% n'ime ọnwa ise gara aga [ruo 9/20]. Dịka ezigbo onye ọchụnta ego ga-agwa gị, ụjọ na-ere ya, na akụkọ ụgha na mgbochi ịgba ọgwụ mgbochi ka a na-eme ebe niile site na akụkọ USB ruo na klaasị ụlọ akwụkwọ ọta akara na-ekwe nkwa na nke a bụ okwu nke anyị na-agaghị erute na nkwekọrịta mba.
Ọnụọgụ ịgba ọgwụ mgbochi n'etiti ndị na -eto eto dị afọ 12 ruo 17, otu n'ime igwe mmadụ nke White House nwere olile anya ịbelata iji ndị na -eme ihe, toro site na 18% n'etiti June ruo 45% dị ka Septemba 20 dị ka data CDC. Na agbanyeghị ọnụ ọgụgụ na percentages, enweghị ajụjụ ọ bụla na ndị na -eme ihe nwere nnukwu ikike iji ikpo okwu ha mee ihe ọma. Ịgbasa ozi nke ndị obodo ga-atụ anya ime ka ndị America ndị ọzọ chebe onwe ha pụọ ​​na COVID-19 bụ naanị ihe atụ kacha hụ anya ruo taa, na ọ gaghị abụkwa nke ikpeazụ.
Site na nloghachi nke ndọpụ mmekọrịta mmadụ na iwu nkpuchi n'ihi ụdị nje Delta, ụdị na azụmaahịa ga -abụ ihe amamihe ịgbaso ụzọ White House wee tụlee ndị na -emetụta ihe dị mkpa na mbọ ha na -agba ndị mmadụ ume ịgba ọgwụ mgbochi, ịghara ikwu maka otu. ngwá ọrụ na -abawanye uru n'ahịa ahịa ha niile na igbe mmekọrịta ọha na -aga n'ihu.
Lelee nyocha HypeAuditor mere n'oge na -adịbeghị anya banyere ndị na -emetụta ụwa 1,600 zuru ụwa ọnụ, na -enye nghọta n'ime ụzọ nkwukọrịta ọkacha mmasị nke ndị na -eme ya na ụdị.
Budata nsonaazụ nyocha ahịa ahịa HypeAuditor
Tags: gbaa ọgwụ mgbochi ọrịamamaahịa ahịaọgwụ ịgba ọgwụahịa ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịamma